BBC Somali - Cayaaraha - Falanqaynta Cayaaraha England Premier League iyo Europe
29 Maarso, 2011, 02:27 GMT 05:27 SGA
Falanqaynta Cayaaraha England Premier League iyo Europe
Waxaad barnaamijkan ku maqli kartaan falanqaynta Cayaaraha England Premier League iyo tartan is reereebka loogu soo baxayo koobka qaaradda Europe ee sanadka 2012-ka. Waxaa ka qaybqaadaya taageerayaal kubadda cagta ah oo jooga waqooyiga London.
Barnaamijka Sabtidan waxaanu kaga hadalnay falanqayn ku saabsan tartanka English Premier League halka kooxuhu kala marayaan dhibcaha ahaan.
Man U oo hogaaminaysa tartanka fursadda ay u haysato in ay hogaaminta ku dhamaysato tartanka oo gabagabada sidaas koobka ku qaaddo, iyo sidoo kale kooxaha ay ka mid yihiin Arsenal oo ku soo xigta iyo Chelsea oo soo raacda maxaa rajadoodu tahay.
Ka faallaynta cayaaraha Premier League, Deysane, Axmed iyo Cabdirisaaq
Ka faallaynta cayaaraha Premier League, Deysane iyo Koronto
Ka faallaynta cayaaraha Premier League
Ka qaybgalayaasha doodda cayaaraha
Ka qaybgalayaasha doodda cayaaraha, Biriq
Waxaa kaloo laga hadlayaa Man City, Tottenham iyo Liverpool halkee ayay ku dhamaysan doonaan tartanka. Liverpool-se fursad ma u heli kartaa in ay ka mid noqoto afarta koox ee ugu sareeya tartanka.
Waxaa kaloo kaloo barnaamijku ka hadlayaa cayaaraha Sabtida 26-ka March dhacay ee dalalka qaaradda Yurub loogu soo baxayo tartanka Europe 2012.